Qedela Uhlu Lokushintshana OST Amaphutha Wefayela Nezinkinga
Ikhaya Imikhiqizo DataNumen Exchange Recovery Qedela Uhlu Lwamaphutha
Exchange OST Amaphutha Wefayela Nezinkinga
Qedela Uhlu Lwamaphutha Nezinkinga Ekushintshaneni OST Amafayela
Lapho usebenzisa iMicrosoft Outlook ukuvula ifayela le- khohlakele or oyintandane ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (OST), noma ulivumelanise neseva ye-Exchange, uzohlangana nemiyalezo ehlukahlukene yamaphutha, engahle ikudide. Ngakho-ke, lapha sizozama ukufaka kuhlu wonke amaphutha angenzeka, ahlelwe ngokuya ngemvamisa yawo evela. Ngephutha ngalinye, sizochaza uphawu lwayo, sichaze isizathu salo esiqondile futhi sinikeze isixazululo, ukuze uziqonde kangcono. Ngezansi sizosebenzisa 'igama lefayela.ost'ukuveza i-Exchange yakho eyiphutha OST igama lefayela.
“Ayikwazi ukuvula amafolda akho e-imeyili azenzakalelayo. Ifayela xxxx.ost akulona ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi."
“Ayikwazi ukunweba ifolda. Iqoqo lamafolda alikwazanga ukuvulwa. Amaphutha kungenzeka ukuthi atholakale kufayela le-xxxx.ost. Yeka zonke izinhlelo zokusebenza ezinikwe amandla ngeposi, bese usebenzisa Ithuluzi Lokulungisa Ibhokisi Lemilayezo Engenayo."
Ukuhlangana nenani elikhulu lezinto ezingqubuzanayo.
Ayikwazi ukuvula izinto ezithile ze-Outlook uma ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
Amaphutha ahlukahlukene lapho uvumelanisa ibhokisi leposi le-Exchange Server ne OST Ifayela.
Ngaphezu kwalokho, lapho usebenzisa ifolda engaxhunyiwe ku-inthanethi (OST) nefayela le-Microsoft Exchange, ungahlangabezana nezinkinga ezilandelayo kaningi, ezingaxazululwa ngu DataNumen Exchange Recovery kalula.
Ama-imeyili nezinye izinto ebhokisini leposi le-Exchange zisuswa ngephutha.
Guqula i-Exchange OST ifayela kufayela le-Outlook PST.
I-Exchange okwamanje ikumodi yokutakula.
I-Oversized OST inkinga yefayela (OST usayizi wefayela ufinyelela noma weqe umkhawulo ongu-2GB).